I-Loft enechibi langasese, enkabeni yedolobha laseNantes - I-Airbnb
I-Loft enechibi langasese, enkabeni yedolobha laseNantes
I-i-loft ephelele ibungazwe ngu-Laurent
I-Loft yangempela enamachibi okubhukuda angaphakathi angaphakathi edolobheni laseNantes, imizuzu emi-5 ukuhamba ukusuka e-Place Graslin, eCours Cambronne naseMachines de l'île (Indlovu).
Le loft ikunikeza umuzwa ongavamile wokuthola i-Nantes!
Le loft iyindawo yasekuqaleni yokuba nesikhathi esiyingqayizivele phakathi nokuvakasha kwakho e-Nantes!
Wonke amakhodi ku-loft ahlonishwa ngokuphelele. Ukhonkolo, i-ayina, ingilazi, nokuxuba amatshe ngokuvumelana. Ukuphakama kophahla kubaluleke kakhulu kwezinye izindawo futhi kusondelene nabanye.
Ikamelo lokulala elikhulu lilenga phezu kwegumbi lokuphumula, elinye ikamelo lilenga ngaphezu kwendawo yokubhukuda, igumbi lokugezela livulekele indawo yokubhukuda...
Isiteshi sesitimela singaphansi kwemizuzu engu-10 nge-tram. Isiteshi se-tram sihamba ngemizuzu engu-2 ukusuka ku-loft. Ukuze upake, indawo yokupaka yomphakathi iphinde ibe yimizuzu engu-2 ukusuka ku-loft.
Ubusuku obunomsindo banqatshelwe kanye nomculo omkhulu ukuze ungaphazamisi omakhelwane.
I-loft inefenisha ephelele, ihlotshisiwe futhi ihlotshisiwe :
- Igumbi lokuphumula elinosofa, i-TV, isihlalo, itafula lekhofi, i-ethanol fireplace (ayifakiwe),
- Indawo yekhishi enesiqhingi esikhulu esiyinhloko, izihlalo ze-Tolix bar, umshini wekhofi we-Nespresso, ipiyano yokupheka, uhhavini we-microwave, ifriji, umshini wokugeza izitsha, zonke izitsha, umshini wokuwasha/ukomisa, i-vacuum cleaner, ibhodi loku-ayina kanye ne-ayina,
- Ikamelo lokulala eliyi-1 eliyinhloko ngaphezu kwegumbi lokuphumula elinombhede obanzi ongu-160 cm, itafula eliseceleni kombhede, ideski elincane. Leli kamelo linekamelo lokugqokela,
- 1 ikamelo lokulala elincane elivulekile ngaphezu kwendawo yokubhukuda elinombhede obanzi wamasentimitha angu-140, isitoreji. Izinga lokushisa kuleli kamelo liphakeme ngenxa yendawo yokubhukuda efudunyeziwe. Kulabo abazwela umsindo nokushisa, impompi yendawo yokubhukuda nomshini wokuhlanza ingase ivimbele ukulala kwezinye izivakashi.
- Indlu yokugezela eneshawa engena endlini, iwashi, umshini wokomisa amathawula, indlu yangasese
elengayo, - Indawo yokubhukuda encane esendlini enamanzi ashisisiwe nengasese ku-loft. Izinga lokushisa kwendawo yokubhukuda limayelana no-28 ° C.
4.72 out of 5 stars from 338 reviews
4.72 · 338 okushiwo abanye
I-loft itholakala imizuzu engu-5 ukuhamba ukusuka "Emishini Yesiqhingi", umbukiso ohlotshaniswayo nendawo yokuzijabulisa lapho ungathola khona indlovu enkulu, i-merry-go-round yomhlaba wasolwandle noma igalari yemishini! ... Yakhiwe ngu- François Delarozière (umqondisi yobuciko) kanye Pierre Orefice, itholakala kwi Ile de Nantes, ku Chantiers epaki, esizeni wangaphambili shipyards disused.
IMishini Yesiqhingi itholakala ezimpambanweni zemigwaqo "zemihlaba esunguliwe" kaJules Verne, indawo yonke eyimishini kaLeonardo da Vinci kanye nomlando wezimboni waseNantes.
I-loft iphinde igxile emcimbini waminyaka yonke wasehlobo (Julayi no-Agasti): "Le Voyage à Nantes".
Ihlobo ngalinye, umcimbi othi “Voyage à Nantes” ugqamisa idolobha ngokuhlanganisa inqwaba yeziphakamiso zamasiko. Amandla ayo: ukuhlukahluka kanye nemvelo yamahhala yeziphakamiso zayo eziningi!
Izinyanga ezimbili, ubuciko bufakwe kulo lonke idolobha futhi beluka ukuhlangana. Amaciko, abadwebi bezakhiwo, abaklami nabalimi bavuselela amakhilomitha angu-12 omzila. Iminyango yezindawo zamasiko ivuleka "ngobubanzi" ukuze yamukele izethameli eziningi ngeviki izinsuku ezingu-7. Iqoqo lezinkanyezi labaculi livela endaweni yomphakathi eba yindawo yokuhlangana. Imisebenzi ivela ekhoneni lomgwaqo kulandela umugqa oluhlaza odwetshwe phansi ...
Le loft ilungele ukuhlala eduze nesibhedlela (CHU) uma ufuna ukuba seduze kwabathandekayo bakho.
Ngokuqeqeshwa kwakho noma imihlangano yobungcweti, i-Nantes CCI nayo ingaphansi kwemizuzu eyi-10 ukusuka endaweni ephakeme.
Thanda ama-sms koxhumana nabo!
Inombolo yepholisi: 44109002101E0